ယေရှုဘယ်မှာနေလဲ - ကမ္ဘာအနှံ့ဘုရားသခင့်ဘုရားကျောင်းဆွစ်ဇာလန်
ဆောင်းပါး > Tammy Tkach > ယရှေုသညျအဘယ်မှာရှိသနည်း
ရှင်ပြန်ထမြောက်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာယေရှုသည်အသက်ရှင်သည်။ ဒါပေမယ့်သူဘယ်မှာနေတာလဲ သူ့မှာအိမ်ရှိသလား။ သူသည်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့အမိုးအကာတွင်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်လမ်းပေါ်တွင်ဆက်လက်နေထိုင်ပါလိမ့်မည်။ သူသည်မွေးစားကလေးများနှင့်အတူထောင့်ရှိအိမ်ကြီးတွင်လည်းနေနိုင်သည်။ သူနေမကောင်းဖြစ်သည့်အခါအိမ်နီးချင်း၏မြက်ရိတ်စက်ကိုသူလုပ်သကဲ့သို့သူလည်းသင်၏အိမ်တွင်နေထိုင်နိုင်သည်။ အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်တွင်ကားပျက်နေသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုသင်ကူညီသည့်အခါယေရှုကဲ့သို့သင်၏အဝတ်များကိုပင်ဝတ်ဆင်နိုင်သည်။
ဟုတ်တယ်၊ သခင်ယေရှုက အသက်ရှင်နေပြီး၊ သူ့ကို ကယ်တင်ရှင်နဲ့ သခင်အဖြစ် လက်ခံထားတဲ့သူတိုင်း အသက်ရှင်တယ်။ ပေါလုက သူသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် သူဤသို့ပြောနိုင်သည်– “ငါ အသက်ရှင်သေး၏။ ငါမဟုတ်တော့ဘဲ၊ ခရစ်တော်သည် ငါ့အထဲ၌ အသက်ရှင်တော်မူ၏။ ယခုမူကား၊ ငါသည် ဇာတိပကတိ၌ အသက်ရှင်သည်ဖြစ်၍၊ ငါ့ကိုချစ်၍ ငါ့အတွက် ကိုယ်ကိုကိုယ်စွန့်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်ခြင်း၌ အသက်ရှင်၏” (ဂလ. 2,20).
အသက်ရှင်ခြင်းဆိုသည်မှာ ခရစ်တော်၏အသက်တာဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင် သူနေထိုင်ခဲ့သည့်အသက်တာကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝသည် သူ့ဘဝတွင် နှစ်မြုပ်နေပြီး သူနှင့် စည်းလုံးနေပါသည်။ ဤအထောက်အထား၏ ကြေငြာချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောက်ခဲ့သော အထောက်အထားလက်ဝါးကပ်တိုင်၏ လက်တစ်ဘက်တွင်ရှိသည်။ လူတစ်ဦးသည် အသစ်သော ဖန်ဆင်းခြင်း (လက်ဝါးကပ်တိုင်၏ပင်စည်) ဖြစ်လာပြီး ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော် (လက်ဝါးကပ်တိုင်၏ ကန့်လန့်ကျင်) ဖြင့် ခိုလှုံသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာနှင့် ဂရုစိုက်မှုဖော်ပြချက်များသည် သဘာဝအတိုင်း လိုက်နာပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၏အသက်တာ၏ဖော်ပြချက်ဖြစ်သောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာဖြစ်သည် (ကော. 3,4) ကျွန်ုပ်တို့သည် မြေကြီးမဟုတ်ဘဲ ကောင်းကင်နိုင်ငံသားများဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ခန္ဓာ၏ ယာယီနေထိုင်သူများသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝများသည် ချက်ခြင်းပျောက်ကွယ်သွားသော အငွေ့အသက်ရှူသံနှင့်တူသည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၌တည်မြဲပြီး အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်။
ရောမ ၁၂၊ ဧဖက် ၄-၅၊ နှင့် ကော ၃ တွင် ခရစ်တော်၏ စစ်မှန်သောအသက်တာ၌ မည်သို့နေထိုင်ရမည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြသထားသည်။ ရှေးဦးစွာ ကောင်းကင်ဘုံ၏ အဖြစ်မှန်များကို ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးမှ ငါတို့အတွင်း၌ ဝှက်ထားသော မကောင်းသောအရာတို့ကို သတ်ပစ်ရမည် (ကော. 3,1.၅). အပိုဒ်ငယ်5တွင် “ဘုရားသခင်၏ ရွေးချယ်တော်မူသောသူ သန့်ရှင်းသူနှင့် ချစ်မြတ်နိုးရသူများအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် နွေးထွေးသောကရုဏာ၊ ကြင်နာမှု၊ နှိမ့်ချမှု၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့မှု၊ သည်းခံမှုတို့ကို ဆွဲဆောင်သင့်သည်” ဟု ရှင်းပြထားသည်။ အခန်းငယ် ၁၄ က ကျွန်ုပ်တို့အား သွန်သင်သည်– “စုံလင်ခြင်း၏နှောင်ကြိုးတည်းဟူသော ဤအရာအလုံးစုံတို့ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ ထားကြလော့။
ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်မှန်သောအသက်တာသည်ယေရှု၌တည်ရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြေကြီးပေါ်ရှိသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်စားပြုပြီးယေရှု၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပေးကမ်းခြင်း၏ဝိညာဉ်ရေးဘဝကိုအသက်ရှင်နေထိုင်ကြသည်။ သူချစ်သောနှလုံး၊ သူဖက်ထားသောလက်များ၊ သူကူညီပေးသောလက်များ၊ သူမြင်သောမျက်လုံးများနှင့်သူတစ်ပါးကိုအား ပေး၍ ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းသည့်နှုတ်ဖြစ်သည်။ ဤဘဝ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေရှုထံမှလူများမြင်တွေ့ရသောတစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ဖော်ပြခဲ့တဲ့သူ့ဘ ၀ ဟာကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်သင့်တယ်။ ဘုရားသခင်နှင့်သူ၏ဘုန်းတော်အတွက်အရာအားလုံးကိုလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တည်းအတွက်ပြုလုပ်ပေးလျှင်ကျွန်ုပ်တို့လည်းအလားတူဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒါဆို ယေရှုဘယ်မှာနေသလဲ။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာနေရာ (ကော. 1,27ခ) သူ့ဘဝကို တောက်ပြောင်စေသလား ဒါမှမဟုတ် သူ့ကို သတိမထားမိလောက်အောင် နက်နဲစွာ ဖုံးကွယ်ထားသလား ဒါမှမဟုတ် တခြားသူတွေကို ကူညီပေးဖို့လား။ သို့ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကို ကိုယ်တော်၌ ဝှက်ထားကြပါစို့။ (ကော၊ 3,3) ငါတို့အားဖြင့် သူ့ကို အသက်ရှင်ခွင့်ပေးပါစို့။